पढ्नुहोस मनतातो पानीसँगै लसुन, अदुवा र कागती सेवनका फाइदा | Rochak Khabar
योगले मात्रै शरीर र मन स्वस्थ हुने होइन । शारीरिक स्वास्थ्यका लागि खानपान र जीवनशैलीको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । त्यसैले उनी खानपानमा उत्तिकै सचेत छन् । हरेक दिन बिहान खाली पेटमै उनी लसुन, अदुवा र कागती सेवन गर्छन् मनतातो पानीसँग । यी चिज सेवन गर्नुका फाइदाबारे उनी भन्छन्ः
योगगुरु डा. विकासानन्दले स्वस्थ जीवनका लागि नियमित योग गर्नु स्वाभाविक नै भयो । तर, उनी भन्छन्– योगले मात्रै शरीर र मन स्वस्थ हुने होइन । शारीरिक स्वास्थ्यका लागि खानपान र जीवनशैलीको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । त्यसैले उनी खानपानमा उत्तिकै सचेत छन् । हरेक दिन बिहान खाली पेटमै उनी लसुन, अदुवा र कागती सेवन गर्छन् मनतातो पानीसँग । यी चिज सेवन गर्नुका फाइदाबारे उनी भन्छन्ःतातोपानी र लसुनतातोपानी र अदुवामनतातो पानीसँगै अदुवा खाँदा पेट सफा हुन्छ । गिलासमा मनतातो पानी पिउँदै एउटा सानो टुक्रा अदुवा चपाएर नियमित निल्ने गर्दा पेटको विकार राम्रोसँग बाहिरिन्छ । स्वस्थ शरीरका लागि २४ घन्टामा पेटभित्र जम्मा भएका सबै विकार पूर्ण रूपमा निष्कासन हुनु आवश्यक हुन्छ ।अदुवाजस्तै सबैको भान्सामा हुने लसुनको गुण पनि ठूलो छ । यसको महत्व बुझ्नसके निकै लाभदायी हुन्छ । बिहानै खाली पेटमा तातोपानीसँगै दुई–तीन पोटी लसुन चपाएर निल्ने गर्दा ब्लडपे्रेसर सही राख्न भूमिका खेल्छ । लसुनले पेटलाई पनि फाइदा गर्छ । पेटमा इन्फेक्सन हुन नदिने तथा सफाइको काम लुसनले गर्छ ।तातोपानी र कागतीमनतातो पानीमा काटेको कागती डुबाएर या निचोरेर नियमित सेवन गर्दा शारीरिक तौल सन्तुलित राख्न भूमिका खेल्छ । स्वस्थ जीवनका लागि शारीरिक सन्तुलन अत्यावश्यक छ । त्यसैले नियमित तातोपानी र कागती खानु फलदायी हुन्छ । प्रायः ओभरवेटका कारण मान्छेहरू कैयौैँ रोगको सिकार हुने गरेका छन् ।
मेरो श्रीमान मसँग दिनकै तीन-चारचोटिसम्म सेक्स गर्नुहुन्छ तर ...? 3,384